आविष्कार केन्द्र भित्र महावीर पुन र इन्जिनियरको कु’स्ती…. (भिडियो) - Nepali in Australia
February 16, 2021 EditorLeaveaComment on आविष्कार केन्द्र भित्र महावीर पुन र इन्जिनियरको कु’स्ती…. (भिडियो)
काठमाडौं- राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका महावीर पुन र केन्द्रमा कार्यरत इन्जिनियर संजयबहादुर सिंहबीच कु’स्ती परेको छ ।आविष्कार केन्द्रमा भएको कु’स्तीमा पौ’ढ पुनले युवा इन्जिनियर सिंहलाई न’राम्ररी प’छारेका छन् ।
कु’स्तीको भिडियो सार्वजनिक गर्दै महावीर पुनले आफूहरुबीचको कु’स्ती अमेरिकाको भन्दा क’म नभएको बताएका छन् । उनले आफू २५ वर्षे युवाहरुसँग बारम्बार कु’स्ती खे’ल्ने गरेको बताउँछन् । अरु युवाहरु हा’रे पनि सञ्जय भने उनीसँग बारम्बार नि’हुँ खो’ज्न आ’इरहने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा विभिन्न प्राविधिक सामग्रीको अनुसन्धान र अ’न्वेषणमा लागेका महावीर पुन र उनको टी’म बेलाबेला यस्ता र’माइला क्रि’याकलाप गरिहन्छन् । भिडियो सहित उनि लेख्छन -लु हर्नुहोस्, विश्व प्रसिद्ध कु’स्ती अमेरिकाने कु’स्ती भन्दा कम छैन ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा मनोरंजनको लागी खे’लिएको म र ईन्जिनियर संजयबहादुर सिंहको कु’स्ती । अनुसन्धानको साथै बेला बेलामा यस्तो कु’स्ती २५ बर्षेहरु संग खेल्छु। अरु त सबै हारी सके तर संजय भाई भने अझै नि’उ खोज्छ । महावीर र सञ्जयबहादुरको कुस्तीः– हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस